संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि महाशाखाले थाल्यो सेरोलजिकल टेस्टको तयारी | ईमाउण्टेन समाचार
संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि महाशाखाले थाल्यो सेरोलजिकल टेस्टको तयारी
भदौ ३, २०७७ पढ्न ५ मिनेट
काठमाडौं, ३ भदौ । देशभरी कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरेको छ । पछिल्लो केही हप्तायता उपत्यका लगायत देशभरी नै संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि महाशाखाले सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरेको हो ।
संक्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न सेरोलजिकल टेस्टको तयारी गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो । कहिलेबाट परीक्षण सुरु गर्ने भन्ने तय नभएपनि देशभरी नै हिमाल पहाड र तराईका जिल्ला समेटेर परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । सेरेलजिकल परीक्षणमा ‘कति केसहरु समुदायमा छन् ? कस्तो अवस्थमा छ?’ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क विभागले जनसंख्याको सर्वेक्षण गर्न प्रयोग गर्ने विधिअनुसार नै नमुना संकलन गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सर्वे मनगणन्ते रुपमा जहाँ केसहरु धेरै छन त्यहाँबाट लिउँ भन्ने हुँदैन । सिस्टममा हुने प्रकृया हो । त्यसले कहाँ निर पर्छ त भन्ने तरिकाले गर्ने हो । जहाँ निर धेरै केस छन त्यहाँ गरेर यसको महत्व हुँदैन यसलाई सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्छ ।’’
कालाजार, डेङ्गी र मलेरिया लगायतका महामारीको परीक्षणका लागि समेत प्रयोग हुने उक्त विधि कोरोना संक्रमणको जोखिम कति भनेर अध्ययन गर्न प्रयोग गर्न लागिएको हो । ९० जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गरिने र एक दिनमा परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो । परीक्षणपछि कुनै व्यक्तिमा संक्रमण पहिले र अहिले छ की छैन भन्ने कुरा यसले पत्ता लगाउँने डा.पाण्डेले बताउनुभयो ।
परीक्षणपछि समुदायमा कोरोना छ की छैन ? कहिले देखि नेपालमा आएको होला ? कहिलेसम्म रहन्छ ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ दिन सहज हुने डा.पाण्डेले बताउनुभयो । पहिलो पटकका परीक्षणमा प्रारम्भिक सूचनाहरु संकलन गर्न सहज भएपनि लगातार तीन वर्षसम्म निरन्तर परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
डा.पाण्डेले संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएको सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । रोगसँग डराएर सधै बन्दाबन्दी गरिराख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले समुदायस्तरमा सचेतना अपनाउँदै कसरी जीवनयापन गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य‐मा वर्गिकृतcorona, edcdnepal, serological test
उपत्यकामा थप १५९ जनामा कोरोना संक्रमण
एनओसीको कार्यालय अनिश्चिकालका लागि बन्द
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालमा ६ हजार बेड थप
त्रिविका सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द
संक्रमण बढ्दै गएमा अस्पतालले धान्न सक्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सरकारी कडाइ र आम नागरिककाे अटेरीपनले कोरोना संक्रमण दर घटेन
निषेधाज्ञाको छैठौं दिन : शहर, बजार र सडक सुनसान